Hawlgallo amni oo ka socda Garoowe & dad lagu tuhusan yahay weererkii afhayeenka baarlamaanka oo la qabtay. – Radio Daljir
Diseembar 21, 2009 12:00 b 0
Garoowe, Dec 21 – Ciidamada ammaanka ee magaalada Garoowe ayaa illaa iyo xalay waday hawlgallo ballaaran oo ay amniga ku sugayeen, kaasi oo si siman uga socday dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Garoowe.
Hawlgalkaan oo lagu tilmaamay midkii ugu baaxadda weynaa ee abid laga sameeyo gudaha magaalada Garoowe ayey ciidanku ku baarayeen gaadiid, guryaha iyo goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada Garoowe, waxaana hawlgalkaani uu ka danbeeyey kadib markii xalay bambaano lagu tuuray gaari uu saarnaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, oo dhaawac fududi uu ka soo gaaray.
Ciidamada ayaa intii ay hawlgalkaan ku jireen qabtay dhawr qof oo lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee xalay lala beegsaday gaariga afhayeen baarlamaanka Puntland, kuwaasi oo haatan su?aalo lagu weydiinayo saldhigyada bileyska ee magaalada Garoowe.
Isu-socdka dadka iyo gaadiidka ayaa is taagay illaa xalay inkastoo barqanimadii maanta wax kasta ay caadi ku soo laabteen, waxaana dhammaan waddooyinka magaalada Garoowe maanta lagu arkayey ciidamada bileyska iyo kuwa daraawiisha oo gaaf wareegya, isla markaana ku hawllan baadi goobka ciddii ka danbaysay falkii xalay dhacay.
Saraakiisha bileyska ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay waxa la taaban karo ee illaa iyo haatan ciidanka amniga u suurto galay kuna saabsan qaraxii xalay, ayaa sheegay xilli dhaw in ay soo bandhi doonaan caddaymo ku saabsan sida wax u dhaceen iyo dadka la qabtay waxa lagu helay.
Dhanka kale, xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha golaha wakiillada iyo labo qof oo kale oo iyana dhaawac fududi ka soo gaaray bambaanadii xalay ayaa la tilmaamayaaa in aad u wanaagsan waxaana lagu wadaa guddoomiyuhu saacadaha soo socda in uu la hadlo saxaafadda si uu uga sheekeeyo caafimaadkiisa iyo sidii xalay wax u dhaceen.
Falkaas weerar ee xalay waxaa si kulul u cambaareeyey mas?uuliyiinta dawladda Puntland sida M/weynaha iyo ku xigeenkiisa, golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka, madaxda maamullada gobollada iyo degmooyinka, aqoonyahannada, culimaa u diinka iyo dhamaman bulshada qaybaheeda kale duwan.
Bari iyo Sool oo galabta yeelan doona ciyaartii ugu danbaysay ee hanashada koobka & Mudug oo ciriirsatay kaalinta 3-aad.